How'd it happen and more reports?: မွတ်ဆလင် hacker များကို သတိထားကျပါ...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တို့ ခင်ဗျား..
အခု ရက်ပိုင်းများတွင် မွတ်ဆလင် Hacker တစုမှ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသော facebook group များ ကို hack လုပ်ပြီး group administrator အဖြစ် သိမ်းယူကာ သူတို့ရဲ့ မွတ်ဆလင် ပုံများကို Group Photo အဖြစ် ပြောင်းကာ လိုက်လံ သိမ်းပိုက်နေပါသည်။ မွတ်ဆလင် hacker များနှင့် facebook group တခုတွင် မေးမြန်းကြည့်ရာ သူတို့အဖွဲ့မှ ယနေ့အထိ ဗုဒ္ဓဘာသာ facebook group ၂၀ ကျော် သိမ်းပိုက်ပြီးကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နောက်ထပ် ဆက်လက် Hack လုပ်ကာ သိမ်းပိုက်ဖို့ group list တွေ အမြောက်အများ ရှိသေးကြောင်း ပြောဆိုပါသည်။ မိမိ လက်လှမ်းမှီသလောက် Hack လုပ်ပြီး hacker တွေက group administrator အဖြစ် အသိမ်းခံလိုက်ရသော facebook group များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီ group တွေရဲ့ လက်ရှိ administrator တွေဟာ hacker တွေ ဖြစ်သဖြင့်လဲ hacker account ရှင် ၇ ဦးကိုလဲ လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ facebook account များသည် မွတ်ဆလင် hacker များ အသုံးပြုသော acount များ ဖြစ်ပါသည်။
1) Khin Khin Thaw https://www.facebook.com/dangerousbreacher
2) Vib Gyor https://www.facebook.com/profile.php?id=100004391681741
3) Xing Kong https://www.facebook.com/xing.kong.50
4) Haramiya Maaro https://www.facebook.com/romio.kil
5) Pyaw Bwal Tar https://www.facebook.com/pyawbwaltar
6) Jagara BaBa (ဘဘ) https://www.facebook.com/pqaqaqp
7) ဦး ပိန် https://www.facebook.com/todayislam79?fref=pb
အောက်ဖေါ်ပြပါ facebook group များသည် မွတ်ဆလင်များ hacked လုပ်ပြီး အသိမ်းခံလိုက်ရသော group များ ဖြစ်ပါသည်
1) “ဗုဒ္ဓသာသနာပြု” facebook Group had been hacked and taken over the ownership by Muslim hackers on Thursday, October 11, 2012 at 2:30am
ကြီးသင်ပညာရေး)” facebook Group had been hacked and take over the ownership by Muslim hackers on Friday, October 12, 2012 at 11:17pm
3) “ဗုဒ္ဓဘာသာ” facebook Group been hacked and take over the ownership by Muslim hackers on Saturday, October 13, 2012 at 1:37am)
4) “NRDC Hacker Group” facebook group had been hacked and take over the ownership by Muslim hackers on Saturday, October 13, 2012 at 9:57pm
5) “ညီတော်နောင်တော် သံဃာတော်များ” facebook Group had been hacked and take over the ownership by Muslim hackers on Sunday, October 14, 2012 at 7:27pm
6) “စာအုပ်စာပေလူ့မိတ်ဆွေ” facebook Group had been hacked on and take over the ownership by Muslim hackers on Sunday, October 14, 2012 at 7:41pm
7) “rupasingi , Dhamma brothers & sisters” facebook Group had been hacked and take over the ownership by Muslim hackers on Sunday, October 14, 2012 at 7:48pm
8) other website been hacked and take over the ownership around last few days.
9)Big Brothers & Sisters
သင့် ဖေ့ဘုတ်အကောင့် အဟက်မခံရစေရန်...
(email တခုမှ ကူးယူပါသည်။
၁) မလိုအပ်တဲ့ Active Sessions တွေဖျက်ပါ။
၂) App password များကို changed ပြောင်း ထားပါ။
၃) ကိုယ်အကောင့်ကို ဝင်လိုက်ရင် ခွင့်ပြုမိန့် လှမ်းတောင်းခိုင်းတဲ့ စံနစ် (Login Approvals) ကို ON ထားပါ။ SMS လက်ခံနိုင်တဲ့ ဖုန်းနဲ့မှ ရမယ်။ Myanmar နိုင်ငံအတွင်းက အကောင့်များ
၄) Recovery Email Address ကို
၅) Security question ကို ပေးထားပါ။ ပြီးတော့ မမေ့ပါစေနှင့်။
၆) အလကားရတဲ့ Wifi များ သတိထားပါ။
၁) strong password သုံးပါ (Useacombination of at
least six numbers, letters, and punctuation marks (like ! and &))
၂) အီးမေး အကောင့် မပေါက်အောင်လည်း သတိထားပါ။ အီးမေး အကောင့်ပေါက်ရင်
၃) သူများစက် သွားသုံးတယ်ဆိုလျှင် သုံးပြီးတာနဲ့ Log-out လုပ်ပါ။
၄) Anti-virus software တစ်ခုခု စက်မှာ မပျက်မကွက် တင်ထားပါ။
၅) Security question ကို ပေးထားပါ။
၆) အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကောင့်မဟက်ခံရစေရန် နည်းလမ်းများ အကောင်အထည်
၇) တွေ့ကရာ လိုက် ကလစ်နှိပ်ခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Posted by Ko Nge at Saturday, November 01, 2014
Labels: နည်းပညာ, အထူးသတင်း